I ukufisa ukuba izinto eziningi endaweni encane isikhala ephilayo futhi lalifuna esintwini umqondo ukudala isakhiwo okhethekileyo, obizwa ngokuthi yokubeka. Nge ngezandla beqoqa wobuciko ezifana akunzima. Futhi eziningi zalezi zinto kungadingeki.
Rack okudingeka bashintshashintshe ngayo futhi ungakwazi ukukhonza letehlukene. Imodeli elula eqala ukuba khona emashalofini ezimbalwa futhi ohlangothini izindonga. Ngokukhethekile, ungakwazi ukwengeza udonga emuva lonke yokubeka noma ingxenye encane nje kuphela. Umangele kanjani ukuzenzela okwakho izandla eshalofini, kutfola injongo yokusetshenziswa kwawo. Lokhu kuzoncika kukhethwa zokwakha.
Ukugcina izinhlobo amahle ezahlukene kanye isitsha sezimbali of ingilazi enombala kungaba uhlanganiswe isakhiwo ingilazi emashalofini.
· Ngenxa yalesi uya ibhokisi kwamapulangwe luze embozwe ukuvenisha noma ukupenda umthunzi oyifunayo.
· Ohlangothini izindonga zixhunywe izibopho futhi usethe ingilazi emashalofini usayizi olungile.
Umphumela waba enhle yokubeka-ukwahlukanisa. Ngalo, ungahlukanisa egumbini yaba izingxenye ezimbili. Emashalofini ingilazi, lapho ukukhanya kwelanga kungena ngaphakathi, singazi ukunciphisa isikhala egumbini.
studios Okwamanje ethandwa kakhulu. Kulesi phrojekthi, ungabona isibonelo esiphelele yokubeka-ukwahlukanisa, esemgwaqweni ngaphezulu kubha futhi ehlukanisa ekhishini esuka egumbini lokuphumula.
Ukuze ukulonda amabhuku kufanele wenze yezandla zabo nge yokubeka of emashalofini ipulangwe, hardboard noma ukhuni. Kuyinto ilungiselelo elinjalo elifana odlule. ingilazi kuphela emashalofini esikhundleni izinkuni.
yokubeka Yenzelwe isitoreji izinto ezisindayo (izincwadi noma imishini) kufanele bufakwe odongeni ukuthuthukisa ukuphepha noma ukukhetha model of the yokubeka nge isithupha phansi, okuyinto uzolinikela ukuzinza.
Ngosizo the yokubeka kungaba ukonga kakhulu ukusebenzisa isikhala egumbini. Lo mklamo ngeke ukulingana kahle esikhaleni ngemva komnyango noma ngaphansi sill iwindi. Futhi abantu abangafuni kucicanise igumbi amakhabethe, Racks ukhetho best.
Kumnandi ukuba indlu wenza into ngokwakho. Rack kusezandleni zakho zingenziwa iziphi izinto ngakwesokunene, kubalulekile ukuxhuma amehlo akho engqondo.
Kuvele okufana ezithakazelisayo ingatholakala ngokuhlanganisa e isakhiwo esisodwa 9 noma 12 ikesi lokhuni. Esheshayo futhi original kakhulu isixazululo. Lokhu yokubeka ngeke ubone akekho owayazi. A materials ehlanzekile zemvelo ukuze usetshenziselwe yokukhiqiza yayo. Enough is sanded futhi ukulungele ukupenda umklamo.
Ukuze womshini omncane bahlala endaweni yokubeka Akubalulekile usebenzise ifomu efanele ngemuva emashelufini. ukumisa yabo kungaba yini. Futhi emaphethelweni eshalofini kungenzeka ukwenza ngqo noma abacaphuni. Ukuze yokukhiqiza isitaki ishidi enjalo liyadingeka fiberboard noma ipulangwe, ezimbili obandayo eshalofini ngamunye, sibe izingalo ezimbili ezine-nickel ipayipi fastener odongeni.
· Zifakwe phezu yokwakha yaseGrisi ukucushwa esizayo futhi regiments Scrollsaw nge-jigsaw.
· Eshalofini ngamunye yamba izimbobo ezimbili ngenhloso ububanzi ngaphansi ipayipi.
· Gaya emashalofini futhi wambozwa ukuvenisha noma ukupenda umbala oyifunayo.
· Ukubeka yokubeka yethu bawubeka endaweni.
· Namathisela the yokubeka odongeni usebenzisa iziqobosho ekhethekile.
· Jabulela umbono isakhiwo ababebuthene.
Yiqiniso, ngeke ukwazi Siwohloza adala wena ukuthenga ngasiphi esitolo sezinto zokwakha. Akuwona wonke ikamelo ungasebenzisa izinto zokwakha efana izinkuni. ofanele kakhulu plastic yokubeka for yokugezela. Umklamo ilula ukuze babuthane bese igibele endaweni efanele. Ngo ezahlukeneyo ayatholakala emakhemisi mini-Racks, okwenzeka phezu yangasese, okuyinto ekahle kakhulu. emashalofini Plastic kungukuthi spoilt by ukuhlela umswakama futhi bahlanza kalula nganoma iyiphi indlela.
ongakhetha semfenisha miningi. Kusukela kubo ungakhetha eyodwa kuphela eyofanelana okukhulu ku elingaphakathi yakho.